Tokony hanavao pejy iray avo lenta ve ianao? Hevi-diso SEO | Martech Zone
Nisy mpiara-miasa amiko nifandray tamiko izay nanaparitaka tranokala vaovao ho an'ny mpanjifany ary nanontany ny torohevitro. Nambarany fa an Konsultan SEORaha niara-niasa tamin'ny orinasa izy ireo dia nanoro hevitra azy ireo fa tsy hiova ireo pejy nalahatr'izy ireo fa raha tsy izany dia mety ho very ny laharany.
Nandritra ny folo taona lasa, nanampy ny sasany amin'ireo marika lehibe indrindra manerantany aho hifindra monina, hampiasa ary hanangana paikady atiny izay nampiditra ny laharam-pahamehana ho fantsona voalohany ho an'ny fanantenana sy fitarihana. Isaky ny scenario rehetra dia nanampy ny mpanjifa aho hanatsara ny pejy misy laharana ankehitriny sy ny atiny mifandraika amin'ny fomba maromaro:
Nampitambatra - Noho ny fomba famokarana atiny, matetika ny mpanjifa dia manana pejy marobe tsy dia mahay milahatra izay mitovy ny atiny. Raha nanana fanontaniana lehibe 12 izy ireo; ohatra, momba ny lohahevitra iray… Manoratra bilaogy 12 ry zareo. Ny sasany milahatra tsara, ny ankamaroany tsy. Hanova endrika ny pejy aho ary hanatsara azy amin'ny fanontaniana lehibe rehetra ho lasa lahatsoratra tokana voalamina tsara, averiko mankany amin'ilay manome ny laharana tsara indrindra ny pejy rehetra, esory ireo taloha, ary jereko ilay pejy mitombo avo lenta. Tsy zavatra nataoko indray mandeha io… ataoko hatrany amin'ny mpanjifa izany. Tena ataoko eto izany Martech ZoneKoa!
Structure - Nasiako tsimoramora ny slug pejy, ny lohateny, ny teny fanalahidy sahisahy, ary ny marika fanamafisana matetika handaminana pejy ho an'ny traikefa mpampiasa ambony. Mpanolo-tsaina SEO marobe no mikoropaka amin'ny famerenana ny pejy slug taloha ho an'ny iray vaovao, milaza fa hahomby izany very ny sasany amin'ny fahefany rehefa novaina. Averiko indray, nataoko hatrany amin'ny tranokalaniko foana izany rehefa nisy dikany ary niasa isaky ny nahavita azy tamim-pahendrena aho.
Content - Namerina lohateny lehibe momba ny lohateny sy atiny aho mba hanomezana famaritana mahaliana kokoa sy vaovao izay mahasarika ny mpitsidika kokoa. Mahalana tokoa no ahenako ny isa-teny amin'ny pejy. Matetika aho dia miasa amin'ny fampitomboana ny isan'ny teny, manampy fizarana fanampiny, manampy sary, ary mampiditra horonantsary ao anaty atiny. Manandrana sy manatsara ny famaritana meta ho an'ireo pejy aho isaky ny manandrana ary mitondra fihenam-bidy tsara avy amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, nanoratra momba ny fomba fantaro ny fahafahan'ny SEO hanatsarana ny laharam-pikarohana ary nilaza fa efa hitako tranomboky atiny toy ny fotoana tsara ahafahana mitondra laharana fanampiny. Laharana faha-9 aho tamin'ny lahatsoratro.
Nanao fanovana tanteraka ny lahatsoratra aho, nanavao ny lohatenin'ilay lahatsoratra, ny lohateny meta, ny famaritana meta, nanatsara ny lahatsoratra tamin'ny torohevitra sy statistika nohavaozina. Nanao jery todika ny pejin'ny fifaninanana rehetra aho mba hahazoana antoka fa voalamina tsara kokoa ny pejiko, havaozina ary voasoratra tsara.
Ny vokany? Nafindrako avy tao ny lahatsoratra laharana faha-9 ka hatramin'ny laharana faha-3!
Ny fiantraikan'izany dia izaho avo roa heny ny fomba fijerin'ny pejy nandritra ny vanim-potoana teo aloha avy amin'ny fifamoivoizana biolojika:
Taona maro lasa izay, it dia azo atao ny manao algorithme amin'ny lalao ary azonao atao ny manimba ny laharanao amin'ny alàlan'ny fanovana ny atiny nalahatra satria niankina bebe kokoa tamin'ny toetra amam-pejy ny algorithman noho ny fihetsiky ny mpampiasa.
Google dia manohy manjakazaka amin'ny fikarohana satria izy ireo manamboatra tsara ny roa. Matetika aho milaza amin'ny olona fa ho takiana ao anaty pejy ireo pejy, saingy miorina amin'ny lazany izany. Rehefa manao ny roa ianao dia mampiakatra ny laharanao.
Ny famelana ny famolavolana, ny firafitra na ny atiny mihitsy no mikatona dia fomba azo antoka hanary ny laharanao satria ireo tranonkala mifaninana dia mampivelatra traikefa ho an'ny mpampiasa tsara kokoa miaraka amin'ny atiny mahasarika kokoa. Ny algorithm dia hifindra amin'ny làlan'ny mpampiasa anao sy ny lazan'ny pejinao.
Midika izany fa tsy maintsy manohy miasa amin'ny atiny sy ny fanatsarana ny endrika ianao! Amin'ny maha olona karamaina ahy hanampy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny motera fikarohana amin'ny fotoana rehetra dia mifantoka amin'ny kalitaon'ny atiny sy ny zavatra niainan'ny mpampiasa mihoatra ny algorithma aho.
Mazava ho azy, te-hamoaka ny karipetra mena hijerena ny motera misy ny fanao SEO tsara toerana sy pejy SEO aho… fa hampiasa vola aho fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa isaky ny mijanona mihoatra ny pejy ireo pejy tsy miova noho ny tahotra na very laharana.
Tokony hanavao pejy iray avo lenta amin'ny valin'ny Search Engine ve ianao?
Raha consultant SEO ianao izay manoro hevitra ny mpanjifanao mba tsy hanavao ny atiny avo lenta indrindra… Mino aho fa tsy miraharaha ny adidinao ianao mba hanampiana azy ireo hitondra vokatra ara-barotra nohatsaraina. Ny orinasa tsirairay dia tokony hitazona ny atiny pejy havaozina, ilaina, maharesy lahatra ary manome fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
Ny votoaty tsara atambatra amin'ny traikefan'ny mpampiasa ambony dia tsy hanampy anao fotsiny milahatra tsara kokoa, izany koa dia mitondra fiovam-po bebe kokoa. Ity no tanjona faratampon'ny marketing amin'ny atiny sy ny paikady SEO… tsy manandrana mamily ny algorithma.
Tags: fanatsarana ny atinyfanatsarana ny atinyatiny misy laharanafikarohana OptimizationSEOseo anganomanavao ny atiny
Fanamarinana, Fanamarinana ary fanadiovana ny lisitry ny adiresy mailaka marobe